Tora mwedzi mitanhatu yeApple Music kutenga AirPods kana Beats | Ndinobva mac
Tora mwedzi mitanhatu yeApple Music yekutenga AirPods kana Beats
Kunyangwe pachiitiko ichi Chipiri chapfuura, Apple haina kuuya kana kutaura nezve maAirPod matsva, hazvireve kuti havana nzvimbo yakakosha yeApple. Zvikuru zvekuti izvozvi kambani inopa yemahara-matanhatu-mwedzi kunyorera kuApple Music. Zvino, yekutenga mahedhifoni kubva kuapuro brand kana Beats modhi.
Apple ichangotanga chipo chitsva chinopa vatengi veAirPods, AirPods Pro, AirPods Max, uye sarudza Beats zvigadzirwa, yemahara-mwedzi mitanhatu kunyorera kuApple Music.
Chipo chiri zvinongoshanda chete kune vatsva veApple Music uye inouya sechikamu chepakeji nyowani yeAirPods mutsara neBeats. Nekutengwa kwechizvarwa chekutanga kana chechipiriAirPods, AirPods Pro, AirPods Max, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro kana Beats Solo Pro, Apple Music vatengi vatsva vachaona meseji muApple Music app kune yavo mitanhatu yemwedzi mahara.
Kune vatengi vari kutenga AirPods kana Beats zvigadzirwa kutanga nhasi, Vachave nemazuva makumi mapfumbamwe kubva pavakabatanidza kutenga kwavo kutsva nemudziyo wavo kuti vagamuchire kupihwa.. Vashandisi veazvino vanokodzera maAirPods kana Beats zvigadzirwa izvo zvisiri Apple Music vanyori vanonyorera vanozove nemazuva makumi mapfumbamwe kubva kunovandudzwa kune yazvino vhezheni yeIOS uye iPadOS kudzikunura kupihwa.
Apple inosimbisa kuti vatengi vanofanirwa Iva neshanduro dzichangoburwa dzeIOS uye iPadOS kuona kupihwa, uko sekuziva kwaunoita kubva kumazuva mashoma apfuura iwo mavhezheni matsva nhamba 15 yeIOS uye iPadOS 15.
Dai iwe wanga uchifunga nezve kutora Apple mahedhifoni, inguvai iri nani pane izvozvi kupfuura iyo kambani yeAmerica inokupa iwe 6 mwedzi yekunyorera, kuisa pamunwe wako nziyo dzinopfuura mamirioni makumi mashanu y inzwi rako idzva renzvimbo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Tora mwedzi mitanhatu yeApple Music yekutenga AirPods kana Beats
iTunes yeWindows inopa kukanganisa kunoita kuti isashande kunze kwemamiriro ezvinhu
Iyi firimu Raymond naRay vachatanga kutora mafirimu mukudonha uye vachazviita muVirginia